Ukwelashwa Okungcono Kwezingubo Ezimnyama Ezingaphansi - Isikhumba
Isazi Khuluma: Imithi yokwelapha ukuqeda izikhali ezimnyama
Expert Speak Treatments Get Rid Dark Underarms
Izingalo zangaphansi ezimnyama ziyinkinga, ikakhulukazi uma ufuna ukugqoka izingubo ezingenamikhono. Ukuchithwa kwesikhumba esikhwameni sangaphansi kuyinkinga ejwayelekile kubantu besifazane. Ziningi izimbangela zalesi simo sesikhumba ukuthi zivele. Ngenkathi kunamakhambi ambalwa asekhaya okukholelwa ukuthi alungile, kukhona nezinye izindlela zokwelashwa ezivunyelwe i-dermatolgist ezingalungisa lesi simo futhi. Sicela ochwepheshe - uDkt Shefali Trasi Nerurkar, MBBS, MD (DERMATOLOGY), i-Consultant Dermatologist, umtholampilo kaDr Trasi kanye nomtholampilo wesikhumba iLa Piel - ukuthi babelane ngokukhanya ngezindlela zokwelapha eziphumelela kakhulu ukuqeda izikhwama ezimnyama zangaphansi.
Yiziphi Izimbangela Zokungcoliswa Kwezikhumba Ngaphansi Kwesikhumba?
Ukudla kokulawulwa kwezinwele
Kunezizathu ezahlukahlukene zokuguqulwa kwesikhumba ngaphansi kwekhanda. Izizathu ezidumile ngama-pseudoacanthosis nigricans (ngenxa yesifo sikashukela, i-PCOS, ukukhuluphala ngokweqile), thinta i-irritant dermatitis kuma-deodrants namakha, thinta i-allergic dermatitis kuzikhilimu zokususa izinwele, ukutheleleka okufana negciwane kanye nefungal, njll.
Yiziphi Izinhlobo Zokwelapha Ezisetshenziswayo?
Isikhumba esingaphansi kwesikhali siyazwela futhi singasabela kalula kokhilimu nokwelashwa. Kuya ngesizathu sokwelashwa kwe-hyperpigmentation kufanele kunikezwe. Kokubili okhilimu bezihloko nokwelashwa kuyadingeka ukuthola imiphumela edingekayo.
Kokhilimu abasebenza ngezihloko, umuntu angasebenzisa okhilimu abakhanyisa isikhumba njenge-arbutin, i-kojic acid, i-hydroquinone, i-azelic acid, i-glycoilic acid ingasetshenziselwa ukukhanyisa isikhumba. Uma kwenzeka isikhumba esijiyile sibonakala kuma-pseudoacanthosis nigricans ngisho nama-topical retinoid cream ayasetshenziswa.
amakhambi asekhaya okususa izinwele ezingafuneki unomphela
Imithi yokwelapha efana nama-peels amakhemikhali (aqukethe i-azelic acid, i-salicylic acid, i-glycolic acid, i-vitamin c, i-lactic acid, i-trichloroactic acid njll ingasetshenziswa). Esikhunjeni esijiyile, i-microdermabrasion iyasetshenziswa futhi ukukhipha isikhumba esikha phezulu bese kusetshenziswa amakhasi. Ukukhishwa okufanayo kungatholakala ngama-lasers afana ne-Erbium Yag noma i-Erbium glass laser. Ekugcineni i-pigmentation ingasuswa yi-Q switched Nd Yag laser.
Yiziphi Izinhlobo Zokusetshenziswa Kwama-Chemical Peels?
Amakhemikhali amakhemikhali aqukethe i-azelic acid, i-salicylic acid, i-glycolic acid, i-vitamin c, i-lactic acid, i-trichloroactic acid njll ingasetshenziswa. Kodwa-ke ngaphambi kokuqala ngamakhasi aqinile qala ukubamba isikhumba ngama-topical cream bese uqala ngama-peel amancane. Uma isikhumba samukela lezi zikhumba umuntu angasebenzisa amaxolo aqinile. Umuntu kufanele akhumbule ukungasheshi ukwelashwa ngoba kungacasula kalula isikhumba. Ngenkathi welapha isikhumba kufanele anikeze isikhumba ama-ceramide namanye ama-moisturiser.
Yimuphi Uhlobo Lokwelashwa Kwe-Laser Osetshenziswayo?
Ekuqothulweni kwesikhumba esikhishwe ngaphansi kwesikhumba esikha phezulu kungatholakala nge-Erbium Yag noma i-Erbium glass laser. Ekugcineni, i-pigmentation ingasuswa yi-Q switched Nd Yag laser.
ukuzivocavoca ukuze ulahlekelwe ngamafutha esiswini
Ngabe Amakhambi Emvelo Nasekhaya Ayasebenza?
Yebo, kumakhambi asekhaya angaphansi kwesikhumba angenza izimangaliso. Ijeli le-aloe vera laziwa njengokwelapha okuhle kwe-hydration kwesikhumba esingaphansi. I-citric acid ne-turmeric paste kungasetshenziswa. I-citric acid kulamula i-antioxidant enhle kanye ne-ejenti yokukhanyisa isikhumba. ICurcumin ku-turmeric acid nayo iyisikhumba esihle somuntu okhipha umbala
Funda futhi: Ukudla Kobuhle: Izithelo ezi-5 Vitamin C Ezicebile Zesikhumba Esikhanyayo
unganciphisa kanjani ukuwa kwezinwele ezisindayo
lehenga blouse back designs 2014
ungasusa kanjani izinwele zobuso ezingafuneki unomphela
unganciphisa kanjani usayizi wesisu
ukuvimbela kanjani ukuwa kwezinwele kanye nodaka